Shiinaha qaboojiyaha warshad Magnet iyo soosaarayaasha | YANJIN
Cabir: 6 * 6cm
MOQ: 200pcs hal naqshad
Waqtiga Lead: 20-35days
Waxaan haynaa naqshado kala duwan oo aad ku xulaneyso. Waxaan sidoo kale ku sawiri karnaa naqshadahaaga dusha sare. Iyo adeegga OEM waa la heli karaa.
Magnetka ka dambeeya ayaa lagu dhejin karaa dusha sare ee dusha sare iyo guddiga birlabta. Sida birta lagu rusheeyey albaabbada qaboojiyaha, khaanadaha birta, daboolida kala duwan, foornooyinka, armaajooyinka fayl garaynta xafiiska, albaabada amniga, sabuurada birlabta, sabuurada magnetic, sabuurada sawirada carruurta magnetic, iwm.
Laguma xayeysiin karo albaabbada qaboojiyaha quraaradaha leh, albaabada alwaaxda, derbiyada, dhalada.
Waxyaabaha dhoobada ah uma adkaysato dhicitaanka, hubi inaad si tartiib ah u maareynayso, fadlan ha ku marin hareeraha iyo hor qaboojiyaha si aad uga fogaato xagashada. Shaqada ugu weyni waa qurxinta guriga, ee maaha u ciyaarista carruurta.
1. Cabbirka: 6 * 6cm
2. Dhoobada dhoobada + Magnet
Qiime macquul ah oo tayo sare leh
4. MOQ: 200pcs hal naqshad
5. Waqtiga hogaaminta: 20-35days
Magnetkeenu waa mid lagu rinjiyeeyay midab qaansoroobaad dhalaalaya ， Kudar midab firidhsan oo midab leh qaboojiyahaaga ama kabadhada fayl garaynta magnetadan aadka u gaarka ah!
1. Isku dheelitiran - Ku soo dheji magnets-ka cusub ee qurxoon bir kasta ama dusha sare ee birlabta, sida guddiga magnetic, jiifka, khariidadaha, qaboojiyaha, qaboojiyeyaasha, qaanadaha, mashiinnada dharka lagu dhaqo, guddiga masaxda qalalan ee birlabta, feylasha xafiiska birta, iwm. sawirro goos goos ah.
2. Qurxin - Qaabab hal abuur leh, midab dhalaalaya, qurxinta qurxinta ku dara.
3. Naqshad kala duwan oo leben gacmeed lagu sameeyo, sida dalka, koonfur-galbeed, classical, romantic, Victoria, oceanic, xayawaannada, shimbiraha, ubaxyada, geedaha, iwm.
4. Dhammaan gacmaha ay ku rinjiyeeyeen shaqaalaheenna xirfadlayaasha ah.
5. Adeegsiga: Ku habboon sharraxaadda gudaha ee nooc kasta oo goobo ah.
Xiga: Faylal faneed